Ikhaya » Iindaba zesikhululo senqwelomoya » Isikhululo senqwelomoya saseKansai saqalisa ukuphuculwa kwesiphelo seTheminali 1
Injongo kukudala amandla kunye nokuphucula amava abakhweli ngaphandle kokwakha i-terminal entsha.
Imisebenzi yala maxesha yesikhululo seenqwelomoya 1 esungulwe ngoMeyi 28
Imisebenzi iya kubandakanya ukwandisa kunye nokulungisa ngokupheleleyo uhambo lwabakhweli kwisikhululo seenqwelomoya
Zonke izithuba ezihlaziyiweyo ziya kuyilwa kweyona migangatho ingqongqo yokusingqongileyo
Izikhululo zeenqwelo moya iVINCI kunye neqabane layo i-ORIX, abanini mvume yoku Isikhululo senqwelomoya saseKansaiIsungule imisebenzi yala maxesha yesikhululo seenqwelomoya 1 ngoMeyi 28, eyona nkqubo inkulu yokusebenza okoko kwavulwa isikhululo seenqwelomoya ngo-1994.
Ngokuhambelana necebo lezokhenketho laseJapan kunye nophuhliso lwezoqoqosho kummandla waseKansai, imisebenzi iyaqhubeka kwaye ikhawulezisa ukwenziwa kwezinto njengangoku kwizikhululo zeenqwelomoya zaseKansai, ezaqalwa kwasekuqaleni kokunikwa imvume ngo-2016. Injongo kukudala amandla angaphezulu kunye nokuphucula amava abakhweli ngaphandle kokwakha i-terminal entsha-indlela esekwe ekwandiseni indawo esele ikho ehambelana neenjongo zezendalo ze-VINCI.
Imisebenzi iya kubandakanya ukwanda kunye nokulungisa ngokupheleleyo uhambo lwabakhweli kwisikhululo seenqwelomoya: ulawulo lokhuseleko, ukukhwela eBhodini, ukuhamba, indawo zentengiso kunye nokufika. Olu hambo lutsha luza kubonisa uyilo lwesakhiwo esenziwe nguRenzo Piano, ngelixa ubuchwepheshe obutsha buza kwandisa ukuhamba nokuphucula amava abakhweli. Abagibeli basekhaya bayakuxhamla kwindawo entsha, esebenzayo ngakumbi nehlangeneyo noluhlu olubanzi lweenkonzo kunye nomrhumo omkhulu weentengiso ezikhoyo kude kufike kwindawo yokuhlala.
Zonke izithuba ezihlaziyiweyo ziya kuyilwa kweyona migangatho ingqongqo yokusingqongileyo yokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kwaye iya kuphucula ukufikeleleka kunye nentuthuzelo kubo bonke abasebenzisi.
Imisebenzi, exhaswa ngurhulumente waseJapan, iya kwenza isikhululo seenqwelomoya ukuba ibe yi "First Pavilion" yeOsaka-Kansai Japan Expo 2025. Baza kunika iindwendwe ukuntywiliselwa kwindawo yokwamkela neyamava ezakubonisa inkcubeko yaseJapan yokwenziwa kwezinto ezintsha, kanye ukufika kwabo elizweni.
UNicolas Notebaert, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba seVINCI Concessions noMongameli weZikhululo zeenqwelo moya zeVINCI, ubhengeze: “Ukuphuculwa kwesikhululo seenqwelomoya saseKansai kuzakusebenza njengomthombo wokukhula kwaye kuphucule nomtsalane wengingqi. Njengomlingani wexesha elide osebenza nabasemagunyeni eJapan, izikhululo zeenqwelo moya i-VINCI iyazingca ngokuma ecaleni kwazo kwesi sigaba sitsha sophuculo oluza kwenza ukuba isikhululo seenqwelomoya sisebenze ngakumbi, sizinze kwaye sibe nezinto ezintsha. ”